Tsara ny fanatsarana sary ary ndash; Semalt Expert
Tsara ny fanatsarana sary ary - Semalt Expert
Rehefa miresaka momba ny fikarohana fikarohana fanatsarana dia azonao atao ny mihevitra fa ny singa pejy na ny lahatsoratra voasintona amin'ny teny fanalahidy no tena manan-danja indrindra. Na dia izany aza, ny sary dia tsy fahita firy izay hampiroborobo ny fametrahana ny tranonkalanao. Misy lafiny samihafa amin'ny fanavaozana ny sary izay tsy maintsy dinihinao mba hampiseho ny votoatinao ao amin'ny pejy voalohany amin'ny Google. Ny sasany amin'izy ireo dia nodinihina etsy ambany, avy amin'i Max Bell, ny Semalt Manager Success Manager.
Fenoy ny soratra famantarana antitra:
Matetika ny soratra amin'ny alàlan'ny famaritana ny sary - feuille de temps logiciel gratuit. Ireo mpampiasa maloto dia mety tsy afaka mahita ny sary sy ny votoatiny, fa afaka mamaky ny lahatsoratra efa antitra izy ireo, ka tokony hampidirinao ao amin'ny sarinao ireo tenimiafina. Izany dia ahafahan'ireo mpampiasa hahatakatra ny toetran'ny lahatsoratrao. Ankoatra izany, tsy afaka hijery ny sary rehetra ny milina fikarohana; Noho izany, amin'ny alàlan'ny fanidinam-pandaharam-potoana alika, azonao atao ny miresaka amin'ny Google, Bing, ary Yahoo momba ny votoatinao sy ny tranonkalanao.
Tsindrio ny sary ary tehirizo ny lanjan'ny rakitra:
Ny haavon'ny pejy sy ny fametrahana fotoana dia singa roa lehibe ao amin'ny SEO. Azo antoka ny filazana fa ny pejy be loatra dia mety hisy fiantraikany amin'ny
Ny fananganana tahirin-tsoratra voarakitra:
Ny iray amin'ireo zavatra manan-danja azonao atao amin'ny votoatin'ny sary ary ny tranonkalanao dia mampiasa ny fanamarinana arahim-peo. Ny tahirin-kevitra voaaro dia endrika metadata iray hafa izay mitantara ny fiasan'ny fikarohana momba ny voambolana ampiasainao ao amin'ny tranonkalanao. Azonao atao ny mampiditra ny fampahalalana momba ireo sokajin'ny tranonkalanao mba hampisehoana ny sarinao amin'ny valin'ny fikarohana. Tsy maintsy manandrana ny sary, sary Vocabulary ary Schema.org ianao mba hamaritana ny sary sy ny votoatin'ny tranonkala.
Ampiasao ny format ankavanana:
Ny iray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra tokony hodinihinao rehefa manatsara ny sary dia mampiasa ny format manan-danja. Ny fitaovana tena sarobidy hitako hitako tao amin'ny aterineto dia ny fanapaha-kevitry ny sary Google. Tokony hanome anarana manokana ny sarinao ianao ary mitazona ny endriny toy ny JPEG. PNG sy GIFF dia endrika roa hafa, saingy ny JPEG dia ampiasaina betsaka ary azo itokisana kokoa noho ny hafa. Ny fanavaozana ny sary amin'ny SEO dia manome ny fitomboany fanampiny izay mety ilainao hametrahana ny pejinao. Azonao atao ny manatsara ny votoatinao sy ny saryo mba hahombiazanao amin'ny orinasanao an-tserasera. Tokony hampiasa foana ny fitsipika momba ny famolavolana ny fampitàna ny tahan'ny mety amin'ny sary, horonan-tsary ary lahatsoratra ianao. Raha mbola misafotofoto foana ianao dia tsy maintsy mijery ny konsole fikarohana an'i Google mba hahazoana vaovao sy toro-hevitra mahasoa.